ukuphuma kwazo kuchaphazela zonke ezine eziphambili abathwali
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iziphumo zichaphazela zonke izinto ezine eziphambili zaseMelika
Iziphumo zichaphazela zonke izinto ezine eziphambili zaseMelika
Zonke iziphathamandla zaseMelika ezine zihlangabezana nemicimbi ngale mvakwemini. NgokweDownDetector.com , T-Mobile, Verizon, Sprint kunye nabathengi be-AT & T baxela iingxaki. Inani lezikhalazo ezivela kubabhalisi beT-Mobile lenyuka ukusuka kwi-47 ukuya kwi-5,731 ngemizuzu. Iipesenti ezingama-59 zixele ingxaki ngefowuni yazo, ama-33% akakwazanga ukufikelela kwi-intanethi ehambayo kwaye i-7% yathi ayinakukwazi ukunxibelelana nenethiwekhi kunye ne-apos. Imicimbi iqale ngo-5: 22 nge-EDT kwaye ichaphazela ababhalisile eHouston, eChicago, eDallas, eLos Angeles, eMiami, eBrooklyn, eMinneapolis, ePhiladelphia, eDenver naseSeattle. Isithethi se-T-Mobile sithi 'sibandakanyekile kwiinjineli zethu kwaye sisebenza kwisisombululo.'
UHLAZIYO:Sifumene ingxelo evela kwi-CEO yeT-Mobile uJohn Legere:Abanye abathengi banengxaki yokufumana umnxeba okhawulezileyo kwinethiwekhi yethu. Enkosi ngomonde ...
QAPHELA 2:Kubonakala ngathi izinto zibuyela esiqhelweni njengoko inani lezikhalazo ezivela kubabhalisi lehle kakhulu. I-T-Mobile kunye neeapos ze-CTO uNeville Ray uthi,Uhlaziyo: Imicimbi yokufowuna isonjululwe kwaye inkonzo ibuyele esiqhelweni. Siyaxolisa kwabo bachaphazelekayo.
Ukusukela nge-6: 14 PM EDT, abathengi beVerizon baneengxaki. Ama-45% athi awanakho ukunxibelelana kwi-intanethi, ngelixa ama-37% engasebenzisi iifowuni zawo. IVerizon & apos; ukuphuma kwayo kukhokelele kwizikhalazo ezivela eWashington, Fort Smith, eBrooklyn, kwisiXeko saseNew York, ePhiladelphia, eDallas, eJonesboro, eDenver, e-El Paso naseColumbia. Ukusukela nge-5: 50 pm EDT, abathengi be-Sprint eChicago, eHouston, eAtlanta, eWashington, eFiladelphia, eOrlando, eLos Angeles, eDallas, eCharlotte naseKansas City bebejongana nokuphuma. I-57% yakhalaza malunga neefowuni, i-37% ayinakusebenzisa i-intanethi ephathekayo kwaye i-5% yayinombala omnyama.
Ababhalisi be-AT & T eHouston, Dallas, eChicago, eCorpus Christi, eAtlanta, eLos Angeles, eCharlotte, eVictoria, eWood Dale, naseOwensboro baxele iingxaki ngomnxibelelanisi ongenazingcingo kunye nenethiwekhi Ukucinywa kwaqala nge-6: 40 pm EDT kunye ne-66% yezikhalazo zazimalunga ne-intanethi ehambayo ukuba iphantsi; I-20% ayinakho ukwenza umnxeba kwaye i-12% ayinako & apos unxibelelane nenethiwekhi ye-AT & T.
I-T-Mobile ithi iinjineli zayo ziyasebenza ukusombulula umba
Kukwachatshazelwe nazizinto eziphunyeziweyo ngorhatya ziMetro yeT-Mobile ehlawulwa kwangaphambili, engothusiyo kuba isebenzisa inethiwekhi yeT-Mobile kunye neeapos. Kwaye abasebenzisi be-Instagram banengxaki namhlanje ukufikelela kwiindaba zabo kunye namabali. Abanye abanako ukungena kwi-app.
Eli libali eliphuhlisayo, ke qhubeka ujonge uhlaziyo. Ukuba unganako.
I-aple iphone 13 umhla wokukhutshwa
ndingayigcina inqaku lam 7
Iimpawu ze-Android 6.0.1 Qaphela 4
I-AT & T, iVerizon kunye neSprint zikhupha amaxabiso abo kwi-Samsung Galaxy S6 kunye ne-Samsung Galaxy S6
Uyifaka njani iGit kwiMac kwaye uvelise iiSSH Keys
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S5 kunye ne-Samsung Galaxy S4
Ukukhokela kwe-iOS kaGoogle kunye neapos kunika iingcebiso malunga nendlela yokusebenzisa amandla e-iPhone